UTI အတွက်အိမ်သုံးဆေးများ (ဆီးလမ်းကြောင်းပိုးဝင်ခြင်း) တစ်ယောက်တည်း - ကျန်းမာရေး | ဇွန်လ 2022
ကျန်းမာရေးပညာရေး၊ ကုမ္ပဏီ, သတင်း ရပ်ရွာ၊ ကုမ္ပဏီ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆန် ဆေးပညာသတင်း, ကျန်းမာရေးပညာရေး သတင်း၊ ကျန်းမာရေး ကုမ္ပဏီ, မူးယစ်ဆေးဝါးဆိုင်ရာအချက်အလက် ဆီးဂိမ်း ရပ်ရွာ၊ မူးယစ်ဆေးဝါးသတင်း, သတင်း ကုမ္ပဏီ, အဆိုပါကုန်ပစ္စည်း သတင်း မူးယစ်ဆေးဝါးသတင်း ကနျြးမာရေးပညာရေး, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ
အဓိက >> ကျန်းမာရေး >> UTI ကာကွယ်ခြင်းနှင့်ကုသခြင်းအတွက်အိမ်သုံးဆေးဝါးများ
ဆီးလမ်းကြောင်းပိုးဝင်ခြင်း (UTI) သည်ထီးဝေါဟာရတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကျောက်ကပ် (Pyelonephritis) ဖြစ်နိုင်သည် - ဆီးအိမ် (cystitis) ပါ ၀ င်နိုင်သောအနိမ့်ဆီးလမ်းကြောင်း၏ကူးစက်မှုကိုလွှမ်းခြုံသည့်အသုံးအနှုန်းအသုံးအနှုန်းဖြစ်သည်။ UTI ဟူသောဝေါဟာရကိုအများအားဖြင့်အသင့်အတင့်အသင့်အတင့်ဖြင့်နာကျင်ခြင်း (သို့) အဆင်မပြေမှုကိုဖြစ်စေသောအနိမ့်ဆီးလမ်းကြောင်းပါ ၀ င်သောကူးစက်ရောဂါများနှင့်အပြန်အလှန်ဖလှယ်အသုံးပြုကြသည်။ ဤ UTI များသည်ဆီးသွားစဉ်မီးလောင်ခြင်း၊ ဆီးအရေးပေါ် (သို့) ကြိမ်နှုန်းနှင့်တင်ပါးဆုံတွင်းနာကျင်ခြင်းများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ပိုမိုပြင်းထန်သောကူးစက်ရောဂါများသည်နံရံနာကျင်ခြင်း၊ အဖျားတက်ခြင်း၊ ပျို့ချင်ခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်အော့အန်ခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။ ဆေးဝါးများသည် UTI များကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ကုသနိုင်သော်လည်းလူအများစုသည်သူတို့၏ UTI လက္ခဏာများကိုအိမ်တွင်းဆေးများဖြင့်သက်သာစေသည်။ UTIs အတွက်လူကြိုက်အများဆုံးအိမ်ကုစားအချို့ကိုကြည့်ကြရအောင်။
UTIs အတွက်အိမ်သုံးဆေးများ (ဆီးလမ်းကြောင်းပိုးဝင်ခြင်း)
ဘက်တီးရီးယားများသည်ဆီးလမ်းကြောင်းထဲသို့ဝင်ရောက်သောအခါ၎င်းသည်ဆီးလမ်းကြောင်းပိုးဝင်ခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။ အထူးသဖြင့် Escherichia coli (အီးကိုလီ) သည်ဘက်တီးရီးယားဖြစ်သည် UTIs ၏အသုံးအများဆုံးအကြောင်းမရှိ အချို့သောကျန်းမာရေးအခြေအနေများနှင့်ဟော်မုန်းအပြောင်းအလဲများသည် UTI ကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်သို့မဟုတ်ရောဂါကူးစက်မှုအန္တရာယ်ကိုမြင့်တက်စေနိုင်သည်။ ပျမ်းမျှ UTI သည်ရက်အနည်းငယ်မှတစ်ပတ်ထက် ပို၍ ကြာနိုင်သည်။ UTIs အချို့သည်သူတို့ဘာသာပြန်သွားကြလိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်းပိုမိုဆိုးရွားသည့်ရောဂါများ (ဆီးလမ်းကြောင်းအထက်ပါ ၀ င်သောရောဂါများကဲ့သို့) သည်ဆေးကုသမှုလိုအပ်သည်။ ပantibိဇီဝဆေးဝါးကုသမှုဖြင့်ပြင်းထန်သော UTI များရှိသည့်လူများစွာသည်တစ် ဦး အတွင်းသက်သာရာရလာကြသည် ရက်အနည်းငယ် ။ အသင့်အတင့် UTIs များအတွက်အိမ်သုံးဆေးများသည်ရောဂါလက္ခဏာများကိုသက်သာစေရန်နှင့် / သို့မဟုတ်ရောဂါကူးစက်ခြင်းမှကာကွယ်ရန်ကူညီလိမ့်မည်။
ဤတွင် UTIs အတွက်အသုံးအများဆုံးအိမ်တွင်းကုထုံးအချို့ဖြစ်သည်။
ရာသီလာသည့် pads များ၊ tampons များ၊ ခွက်များကိုမကြာခဏပြောင်းပါ
အိမ်တွင် UTIs ကိုတားဆီးရန်အကောင်းဆုံးသောအရာများထဲမှတစ်ခုမှာဖြစ်နိုင်သမျှသန့်ရှင်းခြောက်သွေ့စွာနေရန်ဖြစ်သည်။ ရှေ့မှောက်နောက်သို့သုတ်ခြင်း ဆီးသွားပြီးနောက်သို့မဟုတ်အူသိမ်အူမလှုပ်ရှားမှုသည်ဘက်တီးရီးယားများကိုဆီးလမ်းကြောင်းထဲမ ၀ င်စေရန်နှင့်ဆီးလမ်းကြောင်းပေါ်သို့တက်လာရန်ကူညီလိမ့်မည်။
သဘာဝအမျှင်များဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောအတွင်းခံအဝတ်အစားများကိုဝတ်ဆင်ပါ Urethra သည်ဘက်တီးရီးယား ၀ င်ရောက်ခြင်းကိုကာကွယ်ရန်တတ်နိုင်သမျှသန့်ရှင်းခြောက်သွေ့စွာနေနိုင်စေရန်။ အလွန်တင်းကျပ်သောအဝတ်အစားများဝတ်ဆင်ခြင်းသည် Urethra သို့စီးဆင်းမှုကိုပိတ်ဆို့နိုင်သည်။ လေစီးဆင်းမှုမရှိပါကဘက်တီးရီးယားများသည် UTI ဖွံ့ဖြိုးမှုကိုခွင့်ပြုသောပတ်ဝန်းကျင်ကိုမွေးမြူနိုင်သည်။ နိုင်လွန်ကဲ့သို့သောဒြပ်အမျှင်များဖြင့်ပြုလုပ်သောအဝတ်အစားများကို ၀ တ်ဆင်ခြင်းသည်အစိုဓာတ်ကိုထိန်းညှိပေးပြီးဘက်တီးရီးယားများကိုကြီးထွားစေသည်။
ဆီးလမ်းကြောင်းတွင်မည်သည့်ဘက်တီးရီးယားမဆိုရှိနေခြင်းသည်ရောဂါကူးစက်ခြင်းကိုမဆိုလိုပါ။ ဘက်တီးရီးယားကောင်းသည်ပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်ပြီးကျန်းမာသောဟန်ချက်ညီညီထိန်းသိမ်းရန်အရေးကြီးသည်။ မကောင်းသောဘက်တီးရီးယားများအပြင်၊ ထိုးခြင်းသည်ဤကောင်းသောဘက်တီးရီးယားများကိုဖယ်ရှားပေးနိုင်ပြီးသင့်ခန္ဓာကိုယ်၏ pH ချိန်ခွင်ကိုပြောင်းလဲစေနိုင်သည်။ နောက်ဆုံးတွင်၎င်းသည်မကောင်းသောဘက်တီးရီးယားများရှင်သန်ပေါက်ရောက်စေနိုင်သည်။ ယောနိသည်ထုတ်လွှတ်ခြင်းဖြင့်မိမိကိုယ်ကိုသန့်စင်သည်။ သင်ထိုနေရာ၌ဆေးကြောရန်လိုအပ်သည်ဟုခံစားရဆဲဖြစ်ပါက pH မျှတသောပုံသေနည်းကိုအသုံးပြုပါ Eveဝကိုနွေရာသီ ။
သင်၏ပူဖောင်းရေချိုးခြင်း၊ ကိုယ်ခန္ဓာဆေးကြောခြင်းနှင့်အခြားသန့်ရှင်းရေးပစ္စည်းများဖြစ်နိုင်သည် သင့်ရဲ့ UTIs မှတရားခံ ။ ဆိုးဆေးနှင့်အမွှေးအကြိုင်ကင်းသောထိခိုက်လွယ်သည့်ဖော်မြူလာများကိုအသုံးပြုပါ။
5. ရာသီလာခြင်း pads, tampons, ဒါမှမဟုတ်ခွက်မကြာခဏပြောင်းလဲပါ
အနိမ့်စုပ်ယူ pads ဓာတုပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားခြင်းဖြင့်သင်၏ vulva သည်ဘက်တီးရီးယားများနှင့်ထိတွေ့နိုင်ပြီးကူးစက်မှုအန္တရာယ်ကိုတိုးမြင့်စေသည်။ tampons အသုံးပြုခြင်းသည်ဘက်တီးရီးယားများကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေနိုင်သဖြင့်သင်၏ tampon ကိုပုံမှန်ပြောင်းလဲရန်အရေးကြီးသည်။ Tampons နှင့်ရာသီလာသည့်ခွက်များသည်ဖြစ်နိုင်သည် သင့်ရဲ့အန္တရာယ်ကိုတိုးမြှင့် ဒါကြောင့်မှန်ကန်စွာ positioned မပါလျှင်တစ် UTI ရတဲ့သို့မဟုတ်ပိုဆိုးလာ၏။ အကယ်၍ ၎င်းသည်သင်၏ Urethra ကိုတွန်းထုတ်ပြီးသင်၏ဆီးကိုဖမ်းယူပါကဘက်တီးရီးယားသည်ဆီးအိမ်သို့ပျံ့နှံ့နိုင်သည်။ ရာသီခွက်အရွယ်အစားသို့မဟုတ်ပုံသဏ္ာန်ကိုပြောင်းလဲခြင်းသည်ထပ်တလဲလဲဖြစ်ပေါ်သော UTI များကိုတားဆီးနိုင်သည်။
Spermicide သည်သန္ဓေသားအားသတ်ရန်လိင်မတိုင်မီလိင်အင်္ဂါထဲသို့ထည့်သွင်းသောကလေး၏ထိန်းချုပ်မှုအမျိုးအစားဖြစ်သည်။ Spermicides များသည်ယားယံခြင်း၊ ဘက်တီးရီးယားကျူးကျော်ခြင်းမှကာကွယ်ရန်သဘာဝအတားအဆီးများကိုဖယ်ရှားပေးနိုင်သည်။ UTI ကြုံတွေ့နေရစဉ်သုက်ပိုးများရှောင်ကြဉ်ရန်အကြံပြုပါသည်။ ထို့အပြင်လိင်ဆက်ဆံခြင်းမပြုမီနှင့်ချက်ချင်းဆီးသွားခြင်းကိုပြုလုပ်နိုင်သည် UTIs တားဆီးကူညီပေးသည် ။
7. အပူကို Apply
UTI ရှိခြင်းသည်ဆီးခုံမို့မို့နေရာတွင်အဆင်မပြေသို့မဟုတ်နာကျင်စေသည်။ အပူအအေးများသို့မဟုတ်ရေပူပုလင်းများသည်ထိုဒေသရှိနာကျင်မှုကိုသက်သာစေပြီးအသုံးပြုရလွယ်ကူသည်။ တင်ပါးဆုံတွင်းဒေသသို့ ၁၅ မိနစ်ခန့်အပူပေးခြင်းဖြင့်ကြီးမားသောခြားနားချက်ရှိသည်။ အပူချိန်သည်အလွန်ပူလွန်း။ အပူအရင်းအမြစ်သည်အရေပြားကိုတိုက်ရိုက်မထိတွေ့စေခြင်းကြောင့်မည်သည့်ယားယံခြင်းသို့မဟုတ်လောင်ကျွမ်းခြင်းကိုမဆိုကာကွယ်နိုင်သည်။ ပူနွေးသောရေချိုးခြင်းသည် UTI ၏နာကျင်မှုကိုသက်သာစေရန်ယုတ္တိရှိသည့်ဖြေရှင်းနည်းတစ်ခုဟုထင်ရသော်လည်းကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကျွမ်းကျင်သူအများစုသည်ပူဖောင်းရေချိုးခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်သင့်သည်။ သင်ရေချိုးလျှင်ဆပ်ပြာနှင့်ဆူညံသံများကိုဖယ်ထုတ်ပြီးသင်စိမ်သည့်အချိန်ကိုကန့်သတ်ပါ။
UTIs အတွက်အကောင်းဆုံးအိမ်တွင်းကုထုံးတစ်ခုမှာရေများစွာသောက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ရေများများစားစားသောက်ခြင်းသည်ဘက်တီးရီးယားပိုးများကိုကိုယ်ခန္ဓာမှဖယ်ထုတ်ပေးသည်။ ဟားဗတ်ကျန်းမာရေး ပျမ်းမျှကျန်းမာသူတစ် ဦး သည်နေ့စဉ်အနည်းဆုံးလေးခွက်မှခြောက်ခွက်သောက်ရမည်ဟုအကြံပြုသည်။
၉။ cranberry ဖျော်ရည်ကိုသောက်ပါ
ဘက်တီးရီးယားများသည်ဆီးလမ်းကြောင်းအတွင်းရှိဆဲလ်နံရံများနှင့်ကပ်ပါကဆီးလမ်းကြောင်းပိုးဝင်ခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။ cranberry ဖျော်ရည်တွင်ပါဝင်သောအရာဖြစ်သော Proanthocyanidins သည်ဘက်တီးရီးယားများကိုဆီးလမ်းကြောင်းနံရံများနှင့်ကပ်ခြင်းမှကာကွယ်ရန် UTIs ကိုတားဆီးနိုင်သည်။ ကလေ့လာမှုတစ်ခု ဇီဝနည်းပညာသတင်းအချက်အလက်များအတွက်အမျိုးသားစင်တာ cranberry ဖျော်ရည်သည် ၁၂ လအတွင်းလူတစ် ဦး တီထွင်နိုင်သည့် UTI အရေအတွက်လျော့ကျစေသည်ဟုဆိုသည်။
UTIs ကိုကုသရန်မချိုသော cranberry ဖျော်ရည်ကိုသောက်သုံးခြင်းသည်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအသိုင်းအဝိုင်းတွင်အငြင်းပွားစရာဖြစ်သည်။ ဖျော်ရည်ကိုသောက်သုံးခြင်းသည်လူအချို့ကိုကူညီနိုင်သော်လည်းအခြားသူများအတွက်မူအကျိုးမရှိပေ။ cranberry သစ်သီးဖျော်ရည်သည်သူတို့၏ UTI ကုသမှုတွင်နေရာရှိ၊ မရှိဆုံးဖြတ်ရန်လူတစ် ဦး ချင်းစီအားနောက်ဆုံးတွင်ဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။
UTI တွေ့နေစဉ်မကြာခဏဆီးသွားခြင်းသည်ဘက်တီးရီးယားပိုးများကို Urethra မှဖယ်ထုတ်ပေးသည်။ ဆီးဖို့တိုက်တွန်းခုခံတွန်းလှန်ဆီးဆီးထဲမှာပိတ်မိနေသောဘက်တီးရီးယားများကိုထိန်းသိမ်းနိုင်ပြီး၎င်းသည် UTIs ကိုပိုမိုဆိုးရွားစေနိုင်သည်။ လိင်ဆက်ဆံခြင်းမပြုမီနှင့်အပြီးဆီးလမ်းကြောင်းသည်ဆီးလမ်းကြောင်းထဲသို့ ၀ င်ရောက်သောဘက်တီးရီးယားပမာဏကိုလျော့နည်းစေနိုင်သည်။
စားသုံးခြင်း ကြက်သွန်ဖြူ သင်၏ကိုယ်ခံအားစနစ်ကိုမြှင့်တင်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ကြက်သွန်ဖြူသည်၎င်း၏ antibacterial နှင့် antifungal properties ကြောင့်လူသိများသည်။ Allicin သည်ကြက်သွန်ဖြူတွင်ပါဝင်သောဒြပ်ပေါင်းတစ်မျိုး ဖြစ်၍ ရောဂါပိုးမွှားတိုက်ဖျက်နိုင်စွမ်းရှိသည် ထိရောက်သောသက်သေပြခဲ့သည် အီး coli သတ်ဖြတ်မှာ။
ဘက်တီးရီးယားကူးစက်မှုကြောင့်ဖြစ်သောကြောင့်အစားအသောက်သည် UTI ကိုကာကွယ်နိုင်သည် စာရာအမ်မလီ Sajdak , DAOM နယူးယောက်စီးတီးရှိအပ်စိုက်ကုထုံးနှင့်ရိုးရာတရုတ်ဆေးပညာဆရာဝန်တစ် ဦး ။ ဗက်တီးရီးယားပိုးများသည်သကြားကိုနှစ်သက်ကြသည်၊ ထို့ကြောင့်သင်စားလေသကြားဓာတ်များလေ၊
probiotics နှင့်အတူ 13. ဖြည့်စွက်
Probiotics ကျန်းမာသောအူနှင့်ကိုယ်ခံအားစနစ်ကိုအထောက်အကူပြုသောကောင်းသောဘက်တီးရီးယားများ၏ဖြည့်စွက်ဆေးများဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည်အန္တရာယ်ရှိသောဘက်တီးရီးယားများကိုရှင်သန်ကြီးထွားစေရန်နှင့်ကူညီရန်ကူညီနိုင်သည် ကုသနှင့်ကာကွယ်တားဆီး မှုများထပ်တလဲလဲဆီးလမ်းကြောင်းရောဂါကူးစက်။ အဆိုပါ probiotic lactobacillus အထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးများအတွက် UTI ကာကွယ်ခြင်းတွင်ထိရောက်ကြောင်းသက်သေပြခဲ့သည်။
များစွာသောကွဲပြားခြားနားသောရှိပါတယ် probiotics အမျိုးအစားများ ကုန်စုံစတိုးဆိုင်များသို့မဟုတ်ကျန်းမာရေးအစားအစာဆိုင်များတွင် ၀ ယ်ယူနိုင်သည်။ သင်ကသူတို့ကို UTIs အတွက်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားပြီးဘယ်လိုအမျိုးအစားကိုရချင်တယ်ဆိုရင်မသိဘူးဆိုရင်သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူသို့မဟုတ်ဆေးဝါးဆရာဝန်နှင့်ပြောဆိုပါ။
Uva ursi သည်ဆေးဖက်ဝင်အပင်တစ်မျိုးဖြစ်ပြီးရောင်ရမ်းခြင်း၊ Uva ursi ရှိပါတယ် ထိရောက်သောဖြစ်ကြောင်းပြသခဲ့သည် UTIs ကုသနှင့်ကာကွယ်တားဆီးမှာ။ ၎င်းကိုကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအစားအစာဆိုင်များမှဝယ်ယူနိုင်ပြီးအာဟာရရှိသောကျန်းမာရေးပညာရှင်တစ် ဦး သို့မဟုတ်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပညာရှင်၏ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းယူသင့်သည်။
Uva ursi အပြင်, Sajdak သည် UTIs ကိုကာကွယ်ရန်အတွက်အောက်ပါသဘာဝဖြည့်စွက်ချက်များကိုအကြံပြုသည်။
D-mannose သည်သကြားအမျိုးအစားဖြစ်ပြီး၊ ဘက်တီးရီးယားပိုးများကိုဆီးလမ်းကြောင်းအတွင်းမှကပ်ထားခြင်းမှကာကွယ်ပေးသည်။ အချို့ လေ့လာမှုများ D-mannose အမှုန့်ကိုရေဖြင့်သောက်ခြင်းက UTIs အထူးသဖြင့်မကြာခဏသောက်လေ့ရှိသူများအတွက် UTIs ကိုကာကွယ်ရန်အထောက်အကူပြုနိုင်သည်။
Oregano မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံ ၎င်း၏ခိုင်ခံ့သော antibacterial ဂုဏ်သတ္တိများကြောင့်လူသိများသည်။ လေ့လာမှုများအရ oregano ရေနံသည်လူများကိုသတ်ရာတွင်အလွန်ထိရောက်နိုင်သည် အီး coli , ဒါပေမယ့်ဒီလေ့လာမှုများယေဘုယျအားဖြင့်ပြုသောအမှုမှတ်သားရပါမည် in vitro- သိပ္ပံနည်းကျနည်းစနစ်များကို အသုံးပြု၍ ဓာတ်ခွဲခန်းတွင်ဆိုလိုသည်။ Lemongrass ရေနံ နှင့် လေးညှင်းပွင့်ရေနံ UTIs အတွက်အိမ်ဆေးတစ်မျိုးလည်းဖြစ်နိုင်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းတို့သည်ရောဂါပိုးမွှားတိုက်ဖျက်နိုင်မှုဂုဏ်သတ္တိများကြောင့်ဖြစ်သော်လည်း Oregano ရေနံကဲ့သို့သောအလားတူစမ်းသပ်ချက်များ၌အန္တရာယ်ရှိသောဘက်တီးရီးယားများကိုစစ်ဆေးခြင်းဖြစ်သည်။
မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအဆီများကိုကုသမှုမပြုလုပ်မီဂရုစိုက်ရန်အရေးကြီးသည်။ The ဘက်စုံရနံ့ကုထုံးများအတွက်အမျိုးသားအသင်း အကြံပေးသည် ဆန့်ကျင် ဒီအဆီတွေစားသုံး။ အဲဒီအစား, မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအဆီများလုံခြုံစိတ်ချစွာလေယာဉ်တင်သင်္ဘောရေနံနှင့်အတူ topic အသုံးပြုသို့မဟုတ် diffuser ကနေရှူနိုင်ပါသည်။
အကယ်၍ အိမ်တွင်းဆေးများသည်သင်၏ UTI ကိုမကူညီနိုင်ပါကသင်မသောက်ရန်သို့မဟုတ်ဆေးညွှန်းပေးသည့်ဆေးဝါးလိုအပ်လိမ့်မည်။ Advil, Motrin နှင့် Naprosyn စသည့်ဆေးများမသောက်ရသည့် nonsteroidal anti-inflammatory ဆေးများ၊ David Samadi Long Island ရှိစိန့်ဖရန်စစ်ဆေးရုံရှိအမျိုးသားကျန်းမာရေးနှင့်ဆီးလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာကင်ဆာပညာဒါရိုက်တာ၊ MD ။ OTC ဆေးများလည်းရှိသည် AZO ဆီးသွားသက်သာခြင်း ဒါမှမဟုတ် Uristat တက်ဘလက်များ အဘယ်သူ၏အဓိကပါဝင်ပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ် phenazopyridine ၎င်းသည်ဆီးလမ်းကြောင်း၌ယားယံခြင်းကိုလျှော့ချပေးနိုင်သည်၊ သို့သော်၎င်းသည်အကြောင်းရင်းကိုမကုသနိုင်ပါ။
ဆေးညွှန်း UTI ကုသမှုတွင်ပုံမှန်အားဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိဘက်တီးရီးယားကူးစက်မှုကိုသတ်ဖြတ်ခြင်းဖြင့်အလုပ်လုပ်သောပiotိဇီဝဆေးများကိုသောက်သုံးခြင်းပါဝင်သည်။ UTI များအတွက်လူကြိုက်များသောပantibိဇီဝဆေးများပါဝင်သည် amoxicillin , ဆိုက်ပရပ်စ် နှင့် Bactrim ။
ဆက်စပ် : Amoxicillin အကြောင်း Cipro အကြောင်း Bactrim အကြောင်း
UTI ကိုကုသရန်တစ်စုံတစ်ယောက်သည်ပantibိဇီဝဆေးများသောက်သုံးမည့်ရက်အရေအတွက်သည်ကွဲပြားလိမ့်မည်။ မည်သည့်ပantibိဇီဝဆေးကိုမဆိုပyouိဇီဝဆေးတစ်မျိုးလုံးကိုသောက်ရန်လိုအပ်သည်၊ သင်ပိုမိုသက်သာလာလျှင်ပင်။ ပantibိဇီဝဆေးများကိုစောစီးစွာရပ်တန့်စေနိုင်သည့်ဘက်တီးရီးယားအားလုံးကိုသေစေနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ ပိဇီဝဆေးယဉ်ပါးမှု ။
UTIs ထပ်တလဲလဲနေသောအချို့လူများ ပantibိဇီဝဆေး prophylaxis မှအကျိုးလိမ့်မည် ပantibိဇီဝဆေးများသည်ရောဂါတစ်ခုကိုကုသမည့်အစားကူးစက်မှုကိုတားဆီးသည့်ကုသနည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ UTI များကုသရာတွင်အသုံးပြုသောဆေးဝါးများသည်လည်းကာကွယ်မှုအတွက်အသုံးပြုနိုင်ပြီး၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပညာရှင်တစ် ဦး အနေဖြင့်သင့်လျော်သောသောက်သုံးသောပမာဏနှင့်ဆေးပုံစံကိုတစ် ဦး ချင်းအလိုက်ဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။ ကြည့်ပါ ဤဆောင်ပါး UTI ဆေးဝါးများအကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန်။
သင်၏ဆီးလမ်းကြောင်း၌ဆီး၌သွေးရှိလျှင်၊ ဖျားလျှင်၊ UTI လက္ခဏာများကြောင့်နောက်ကျောနာကျင်မှုဖြစ်လျှင်သင်၏မူလတန်းစောင့်ရှောက်မှုဆရာဝန်ထံချက်ချင်းသွားပါ။ Sajdak မှအကြံပေးသည်။ UTI များသည်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ရွေ့လျားနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်သွားရန် ပို၍ ကောင်းသည်။
သဘာဝကုထုံးများသည် UTI လက္ခဏာများကိုသက်သာစေရန်နှင့်ကာကွယ်ရန်အတွက်အကျိုးရှိနိုင်သည် မှုများထပ်တလဲလဲ UTIs , သူတို့သည်ရောဂါကူးစက်မှုကိုကုသရာတွင်ထိရောက်သောမည်မဟုတ်ပါ။
သုံးရက်ကြာပြီးနောက်ရောဂါလက္ခဏာများဆက်ရှိနေပါကပantibိဇီဝဆေးကိုဆက်သောက်ရန်အချိန်တန်ပြီဖြစ်သည် အိုင်ဗီ Branin အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးကိုအထူးပြုသောနယူးယောက်မြို့မှသဘာဝဆေးဆရာဝန်။ ငါသည်လူနာတစ် ဦး အားသူတို့၏ဆရာဝန်ကိုယူအက်စ်အေ (ဆီးစစ်ခြင်း) နှင့်ပcaseိဇီဝဆေးများအတွက်ဆေးညွှန်းအတွက်တွေ့ရန်သုံးရက်ကြာလျှင်တိုးတက်မှုမရှိပါကဖြည့်ရန်အကြံပြုသည်။
UTI ကိုမကုသဘဲထားခြင်းသည်နောက်ထပ်ကျန်းမာရေးပြproblemsနာများဖြစ်စေနိုင်သည်။ ဘက်တီးရီးယားများသည်ဆီးသွားသောသူ (သို့) ကျောက်ကပ်သို့ရောက်ရှိပြီးကျောက်ကပ်ရောဂါကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။ စဉ်အတွင်းကုသမှုမရှိဘူး UTIs ကိုယ်ဝန် စောစီးစွာမွေးဖွားခြင်းနှင့်ကိုယ်အလေးချိန်နိမ့်ခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။ သွားမလာသေးသည့် UTI ကိုကုသရန်ရှာဖွေခြင်းသည်အမြဲတမ်းကောင်းပါသည်။
Low-Carb 101: Good Carbs နှင့် Bad Carbs
ကျန်းမာရေးအာမခံအတွက် network out ဆိုတာဘာကိုဆိုလိုတာလဲ
အိမ်မှာ uti ကိုကုသနိုင်တဲ့အရာကဘာလဲ
Levitra 20 mg ကိုဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ